Momba anay - Shandong Yunlong Eco Technologies Co., Ltd.
Shandong Yunlong Eco Technologies Co., Ltd. dia manokan-tena amin'ny famolavolana sy famokarana fiara elektrika angovo vaovao mifanaraka amin'ny homologation Europe EEC L1e-L7e.Miaraka amin'ny fankatoavan'ny EEC, nanomboka ny orinasa fanondranana nanomboka tamin'ny taona 2018 teo ambanin'ny teny faneva: Yunlong E-cars, Electrify Your Eco Life.
Mahatratra 700 000 mahery ny foibenay㎡, manana atrikasa manara-penitra 6 anisan'izany ny foibe R&D miaraka amin'ny maoderina syfitaovana famokarana manan-tsaina ho an'ny dingana famokarana lehibe toy ny stamping, welding, hosodoko, fivoriambe, mba hiantohana ny kalitaon'ny famokarana sy ny fahafaha-mamokatra isan-taona amin'ny 200,000 sets isan-taona.Miaraka amin'ny ekipa za-draharaha sy matihanina, injeniera R&D 20, injeniera Q&A 15, injeniera serivisy 30 ary mpiasa 200, ny fiara elektrika dia afaka mahafeno fepetra sy amidy eran'izao tontolo izao.Amin'izao fotoana izao, mifantoka amin'ny fiara mpandeha elektrika ho an'ny fiara fitaterana fohy izahay, ny fandehanana isan'andro mba hampihenana ny famoahana karbaona, ary ny fiara fitaterana entana elektrika ho an'ny vahaolana farany amin'ny fampiasana ara-barotra, fanaterana na lozika, mba hamonjena ny vidin'ny asa sy ny fanjifana solika.
Yunlong E-fiara dia nahomby tamin'ny dingana iraisam-pirenena amin'ny kalitao tsara sy ny fampisehoana, miampy tonga lafatra fanompoana taorian'ny varotra, nahazo fiderana be avy amin'ny mpanjifa, avy amin'ny firenena mihoatra ny 30 manerana izao tontolo izao, toa an'i Alemaina, Danemark, Soeda, Failandy, Frantsa, Polonina, Tseky, Holandy, Italia, Rosia, Okraina, Japon ary Korea Atsimo sns. Manantena izahay fa afaka miara-miasa aminao mandritra ny fotoana maharitra fandresena-fandreseny.
Ao amin'ny fikarohana ny Teknolojia Vaovao, New Industries, dia niforona tsikelikely ny fototarazo fampandrosoana tsy manam-paharoa, manafaingana ny fanovana avy amin'ny orinasa mpamokatra mankany amin'ny serivisy famokarana sy orinasa fanavaozana ara-teknolojia, nitarika ny fanovana sy ny fanavaozana ny indostrian'ny fiara elektrika angovo vaovao miaraka amin'ny fanavaozana ara-teknolojia.
Ny kolontsain'ny orinasa Yunlong dia misy fiantraikany lalina amin'ny ho avy sy ny fampandrosoana ny orinasa.Ny tanjonay dia ny hanamafisana ny fiainanao ara-tontolo iainana, hanao tontolo iainana.Ny tanjonay dia ny manatsara hatrany, manaraka ary manatanteraka ny fangatahanao.Ny soatoavina fototra dia ny fahamendrehana, ny fanavaozana, ny fiaraha-miasa.
Raha mila antsipiriany bebe kokoa momba anay dia aza misalasala mandefa sary amin'ny fotoana rehetra.
Vina: Ampandehano ny fiainanao ara-tontolo iainana, manaova tontolo iainana.
Iraka: Manatsara hatrany, araho ary tanteraho ny fangatahanao.
Soatoavina: fahamendrehana, fanavaozana, fiaraha-miasa.
Ny MIIT of China dia nanambara ny orinasa
Izahay dia ao amin'ny lisitry ny MIIT any Shina, manana ny fahaiza-manao amin'ny famolavolana sy ny mpanamboatra ny fiara elektrika ary afaka mahazo ny fisoratana anarana & fahazoan-dàlana.
Fahaizana R&D matanjaka ary ekipa teknika za-draharaha
20 R&D Engineers, 15 Q&A Engineers, 30 Service Engineers ary 200 mpiasa
Eoropa EEC L1e- L7e Fankatoavana ny Homologation
Ny fiara elektrika rehetra dia nahazo ny fankatoavana EEC COC ho an'ny firenena eoropeana.
Varotra matihanina sy serivisy aorian'ny varotra.
Manome serivisy matihanina mialoha sy aorian'ny varotra ny mpanjifanay sarobidy.